Kurota H11 Kunyorova uye Kuoma, ongororo yakadzama | Gadget nhau
Kurota H11 Yakanyorova uye Yakaoma, yakadzama wongororo yeiyi vacuum / mop
Ndirove ini inoramba yakamisikidzwa seimwe yemafemu anopa zvirinani mhando / mutengo muyero muchikamu chekuchenjera kuchenesa imba, kunyanya kana tikataura nezve vacuum cleaners yavo, marobhoti uye zvimwe zvishongedzo zvinotarisa pakuita kuti hupenyu hwedu huve nyore kana zvasvika pakuchenesa imba yedu. .
Panguva ino tinotarisa zvakadzama paH11 Wet and Dry itsva, vacuum cleaner inotsvaira zvakadzika nekukwesha mune imwe pass. Isu tinokuratidza chigadzirwa chitsva ichi cheDretame uye tinokuudza zvatakasangana nazvo nekushandiswa nguva dzose kwechigadzirwa ichi icho chashandura chikamu umo pasina akawanda mamwe maitiro anopihwa.
2 Pakeji zvemukati uye kugona
3 Hunhu hwehunyanzvi uye ruzivo rwemushandisi
Kana iwe uchibheja pamhando yakaita seDreame, iwe unotoziva zvekutarisira maererano nekugadzirwa uye zvigadzirwa, yakave inoratidzirwa nekunaka kunopera uye akareruka asi anopikisa mapurasitiki akapa akawanda ezvigadzirwa zvayo hunhu husingaenzaniswi, uye zvaive zvisiri iva mushoma neiyo itsva H11 vacuum cleaner, iyo yatinogona kukurumidza kuenderana nerudzi rweAsia nekungotarisa. Zviyero zvinonyanya kutaurwa, uye izvi zvinoperekedzwa nehuremu hwakakwana hwekutenderera 4,7 Kg mumuviri wakanyanyisa.
Ichi chinoshamisa chishandiso chinogona kuve chako nemutengo wakanakisa
Nyaradzo haisi kuzokunda, izvo zvinoonekwa, zvisinei kuti ma rollers ayo uye simba rebhurashi richaita kuti zvive nyore kwatiri kuita mapasita. Porting yakanyanya kuoma, nekudaro kuisirwa kwekuchaja uye kuzvichenesa chiteshi chichave chiri pasi. Isu hatisi kutarisa chigadzirwa chakareruka uye chine zvakawanda zvakasiyana-siyana, zvisinei, isu tinofanira kufunga nezvezvinangwa zveDreta H11, kure nekuchenesa kwakajeka uye kwakajairwa, kutarisisa nzvimbo dzakakura uye nekuwanikwa kwakawanda. Zvose izvi tinofanira kufunga nezvazvo tisati taenderera mberi nekutenga.
Pakeji zvemukati uye kugona
Kure kubva pane zvazvingaite, iyi Dreame H11 inouya mune yakaringana compact package, mubato wealuminium wakareruka uye unobvisika, mukuwedzera pakutitendera kuti titarise mashandiro evacuum cleaner nemabhatani ane kubata kwakanaka. Muviri une mota, mutsvairo uye matangi maviri emvura akaiswa zvakananga pabhokisi, uye ese anopfeka uye ekugadzirisa zvikamu zvinobviswa, sezvinogara zvichiitika muDreta. Ne "tinya" system isu tichaisa mubato uye isu tichava neiyo Dreame H11 yakaunganidzwa zvizere kuti titange nemiedzo yekutanga.
Zviri mukati mepakeji sezvatataura ndezvekuti spartan, tinowana iyo huru tangi pane kaviri tangi, mota uye mutsvairo, yekuchaja uye yekuzvichenesa base, pamwe chete neadapta yemagetsi uye rudzi rwe "brush" ine. kuwedzera kwayo kwemvura kana zvinwiwa zvekuchenesa zvinozotibatsira kuchengeta matangi emvura akachena. Muchikamu chino Dreame H11 inotipa kunzwa kwakanaka, kuiswa kunokurumidza uye isu hatina kuda mirairo kuti ndiende. Zvinofanira kucherechedzwa kuti Dreame inosanganisira chaiyo yekuchenesa mvura yatichakurumidza kutenga zvakasiyana, kunyangwe isu tisati tawana poindi yekutengesa.
Zvakadaro, unogona kunge uchishamisika kuti sei tichitaura muhuwandu hwe "Deposits", Izvi zvinodaro nekuti iyo Dreame H11 ine matangi maviri akasiyana, imwe yemvura yakasviba ye500ml ndiwo unowanikwa pazasi pemutsvairo; uye imwe yemvura yakachena ye900ml iyo inoona nezvekupa mop nemvura yekuchenesa. Iri tangi remvura ine tsvina ndipo parinoitawo basa rekuita dendere tsvina yatinosveta.
Iyo inoratidzira pani yemabasa kumusoro ichatiratidza iwo maviri ekuchenesa modhi: Standard uye Turbo. Nenzira imwecheteyo, ichatizivisa nezve chikamu chebhatiri rasara uye kana iyo yekuzvichenesa modhi iri kushanda panguva iyoyo, iyo inofanirwa kunge iri pachiteshi chekuchaja. Iyi ndiyo nzira yatinowana nayo mabhatani maviri kumberi kwechibato kumberi kwekubata masimba akasiyana ekuchenesa, uye imwe iri kumusoro kwechibato icho chiri kutungamira yekumisikidza yekuzvinatsa modhi.
Hunhu hwehunyanzvi uye ruzivo rwemushandisi
Chekutanga tichataura nezve autonomy, Iyo Dreame H11 ine 2.500 mAh bhatiri iyo inotipa anosvika makumi matatu maminetsi ekuzvimiririra mune yakajairika mode, izvi zvichadzikiswa zvinooneka kana tikaenda kune izvo Dreame inofunga nezve turbo mode. Kune chikamu chayo, vacuum cleaner ine a 10.000 pascal suction simba, yakadzikira zvishoma pane yainopa mune mamwe maturusi akadai seanonyanya kufarirwa anobatwa nemaoko vacuum cleaners, kwaanogona kusvika kusvika zviuru makumi maviri nezviviri, zvichiva izvo. bhurasho rayo rinotenderera kusvika ku560 revolutions paminiti Zvichabatsira kubata tsvina yakanyanya kuvharirwa uye izvi zvinobvumira mudziyo kushanda nesimba rakaderera rekusveta.
Kune chikamu chayo, ruzha ruchasvika 76dB iyo zvakare inowira pasi pezvakanakisa mhedzisiro iyo mhando yakakwanisa kupa pane mamwe maturusi. Se mukana, isu tine mukana wekuitenga mukati Amazon, nezvisungo zvese zvinosanganisirwa nazvo.
Imwe yematambudziko makuru atakawana, kupfuura uremu, iko kukora kwebhurashi, izvo zvinotitadzisa kuenda pasi peimwe fenicha, nenzira imwechete uye tichifunga nezvekuenda kweiyo Dreame H11, zvingadai zvakave. zvinonakidza kuisawo mwenje we LED pane brashi. Nekuda kwake, uye sezvazvingatarisirwa, mhedzisiro iri parquet inoparadza, mvura yakawandisa inosiya mamakisi anooneka, zvisinei, ichi chigadzirwa chakanyatsogadzirirwa porcelain pasi, matombo uye kunyange vinyl, uko zvigumisiro zvave zviri nani zvikuru.
Iyi Dreame H11 chigadzirwa chine hunyanzvi chinoisa zviyero zvinotevedzwa muchikamu sereferensi, kunyangwe iine mapoinzi mashoma akadai sehuremu uye kunetsa kuwana pasi pefenicha, ine simba rekusveta rakanaka, zvinhu zvakanakisa zvekuvaka uye kupera uye iyo. kuchaita kuti zvinhu zvive nyore kwatiri chero bedzi tisina parquet kana pasi pemapuranga. Mutengo wayo wakatenderedza iyo 320 euros munzvimbo dzakajairika dzekutengesa seAmazon.
H11 Kunyorova uye Kuoma
Yakatumirwa pa: December 28 we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: December 28 we2021
Zvakanaka zvakapedzwa zvinhu uye zvivimbiso zvekugadzira
Simba rakanaka uye yakanaka porcelain inopera
Zviri nyore kufamba
Kupinda kwakashata mumidziyo yakaderera
Mibairo yakaipa pa parquet
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Kurota H11 Yakanyorova uye Yakaoma, yakadzama wongororo yeiyi vacuum / mop